Explore India Tourism | Top Tourist Destinations any India
Explore India - Toerana fizahan-tany any India
Indraindray India - ny firenena maro samihafa dia firenena mitongilana amin'ny fiainana. Ny arabe sy ny lalana, ny alkaola ary ny tsangambato dia manana faratampony izay tsy mahavery fotsiny. Ny faritanin'i India tsirairay dia manana kolontsaina sy fomban-drazana tokana izay manome ny fanahy ho an'ny firenena matanjaka. Ny karazam-bavaka isan-karazany ao India dia nahatonga ny mpandefa mpikaroka manerana ny tany. Ireo tendrombohitra miala sigara, farihy mahafinaritra sy kirany, ireo trano mimanda lehibe, ireo mari-pamantarana ara-javakanto, ireo sambo voajanahary ary ny zavatra hafa ... izay azonao eritreretina hijerena an'i Inde. Ny fonosana fitsidihan'i India dia natao manokana mba hijerena ny fahasamihafana.
East India:Ny tontolon'ny fitondrana am-polony maro dia efa manana kolontsain'ny foko sy fombam-pivavahana ara-pivavahana. Ny mari-pamantarana mainty sy ny tempoly mahafinaritra, ny toeram-piantsonan'ny tendrombohitra, ny zaridana, ny ala voajanahary ary ny ala mikitroka, ny renirano sy ny moron-dranomasina tsy misy fialan-tsasatra dia fialofana tsara ho an'ireo mpandeha lavitra.
India:Ny faritra tsy dia fantatra loatra, ny tany mistery any avaratra-atsinanana dia tsy azo inoana fa toerana mystika hitsidika. Tena marina ny lanitra tsy fantatra. Nipongatra tany amin'ny tendrombohitra tsy nisy pentina sy lohasahan'i Himalayas, any avaratra atsinanan'i Inde ny fanadihadiana faran'izay kely indrindra, hafa ankoatra an'izao tontolo izao ary any amin'ny toerana mahafinaritra indrindra any Inde.
West India:Manankarena eo amin'ny tantara, ara-panahy, karazany sy kolontsaina isan-karazany, i West India dia manome vahaolana isan-karazany ho an'ny dia lavitra toerana. Io faritra io dia ahitana kirany mahavariana mahafinaritra, mahafinaritra hills, fiaramanidina miala sasatra, trano mahavariana mpanjaka imperial, kolotsaina mihetsiketsika, fivahinianam-pialam-boly, marika efa antitra ary fiainam-baovao mahavariana.
South India:Ny South India dia mahay ny zavatra rehetra hitadiavan'ny mpitsidika. Izy io dia misy toeram-piantsonana tsara tarehy mahafinaritra, rindrina, toeram-ponenan'ireo bibidia fahiny, tsangambato fahatsiarovana fahiny, kiriolona mamirapiratra, riandrano mamirapiratra ary trano fonenana.
Central India:Central India, fantatra amin'ny fahasamihafany mahafinaritra, dia toeram-ponenan'ireo toerana masina sy ny zaridaina nasionaly. Ankoatra ny biby an-tanety dia manana fiaramanidina sy tsangambato mahafinaritra, tanàna, toeram-ponenana, ary fivahinianana fivahiniana tranainy; Ny India afovoany India dia manolotra ireo mpitsidika azy any an-tsarimihetsik'i attracts.
Fidio izay mety aminay India Tour Packages mba hahatsiarovana ny andro fialantsinao.